कहाँ छन् ती मधेशी युवा जसले हाँकेका थिए मधेश आन्दोलन ? | सहारा टाइम्स
Home » madhesh » कहाँ छन् ती मधेशी युवा जसले हाँकेका थिए मधेश आन्दोलन ?
कहाँ छन् ती मधेशी युवा जसले हाँकेका थिए मधेश आन्दोलन ?
२०६४ देखि २०७० सम्म भएको मधेश आन्दोलनमा सहादत दिएका युवाको उमेर ४० भन्दा तल्लो उमेरका छन् । यसले पुष्टी हुन्छ कि आन्दोलन युवाको अगुवाईमा भएको थियो । आन्दोलनको हरेक मोर्चा युवाकै अगुवाईमा हुन्थ्यो ।
तर देशको नेतृत्वमा युवाको अगुवाई देखिएको छैन । अहिले पनि त्यही बुढापाकाको अगुवाई भइरहेको छ । त्यसबाट निराश भएर थुप्रै युवाहरु प्लायन भएका छन् ।
तर त्यो पलायन रोक्न कसैले पहल गरेको पनि देखिदैन । जब आन्दोलन हुन्छ अनि त्यसलाई चर्काउन युवाको खोजी हुन्छ जब अबसरको कुरा हुन्छ अनि त्यतिबेला आफन्तलाई खोजिन्छ या आफै जान्छन् र त्यसबाट विरक्तिएर राजनीतिकलाई गाली गर्दै हिडेका छन् ।
पहिलो मधेश आन्दोलन शुरु भएको १३ वर्ष भइसक्यो । १३ वर्षअघि मधेश आन्दोलन उठान गर्नका लागि अहोरात खट्ने अधिकाँश मधेशी युवाहरु प्रत्यक्ष राजनीतिक संलग्न देखिएको छैन । कोही शिक्षक भएका छन्, कोही कर्मचारी त कोही एनजियोमा लागेका छन् ।
कोही घर बसेका छन् भने कोही विदेश पलायन भएका छन् । यद्यपी केही युवाले राजनीतिलाई निरन्तरता दिएपछि पार्टीको ठूलै पदमा पुगेका छन् भने कोही मन्त्रीसम्म पनि भएका छन् ।
अवसरको अरुको पोल्टामा
मधेश आन्दोलन गर्ने युवा, सहादत दिने युवा, घाइते हुने युवा तर अवसर तिनै बुढापाकाहरुले पाए र त्यही कारणले अधिकाँश मधेशी युवाहरु राजनीतिकबाट पलायन भएका छन् । रातोपाटीले तयार पारेको एउटा रिर्पोर्टमा सिरहाका अजितलाल कर्ण भन्नुभएको छ, मधेश आन्दोलनपछि अवसरवादीहरुको हावी भयो र जुन युवाले आन्दोलन गरे ती सबै साइड लागे ।’
तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका विद्यार्थी नेताको रुपमा मधेश आन्दोलनमा शुरुदेखि सक्रिय रहेका कर्ण अहिले धनुषामा गाई फार्म सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ ।
मधेशको पोल्टिक्सबाट युवाहरु निराश भएर धेरै पलायन भए तर त्यसको खोजखबर गर्ने कसैलाई फुर्सद नरहेको उहाँले बताउनुयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, त्यतिबेला आन्दोलनको तयारीदेखि सफल पर्नेसम्म सक्रिय भएर लागेका युवामध्ये मुस्किल पाँच छजना राजनीतिकमा सक्रिय छन् ।
बाँकी को कहाँ गए, सकैसँग सम्पर्क छैन ।’ आन्दोलन गरेका मुकेश चौधरी, इन्द्रकुमार मधेशानन्द, मुकेश यादव, नरेश यादव, विजय यादव, आजम परवेजलगायतका युवाहरु राजनीतिकबाट पलायन हुनुभएको छ ।
मुकेश चौधरी हाल जेलमा हुनुहुन्छ । जनकपुर बमकण्डमा मुछिएका कारण उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ । मधेशी युवामा निकै सम्भावना भएका नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ तर एउटा राजनीतिक दुखद घटनाले उहाँ राजनीतिकबाट टाढा हुनुहुन्छ । इन्द्रकुमार मधेशानन्द एउटा यस्तो युवा हुनुहुन्छ जो २४ घण्टा आन्दालनमै हुन्छन् ।
राजनीतिमा सक्रिय जस्तो देखिनुहुन्छ तर उहाँ अवसरबाट बञ्चित हुनुहुन्छ । हाल उहाँ शिक्षक पेसामा आवद्ध हुनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, हामीले जीवनका महत्वपूर्ण समय मधेश आन्दोलनलाई दिएका छौं । जुन समयमा मधेशको बारेमा कोही बोल्ने व्यक्ति थिएन ।
मधेशको बारेमा बोल्न डराउँथे त्यो बेलादेखि नै मधेश आन्दोलनमा लागेका छौं तर आज अवसर अरुको पोल्टामा गएको छ ।’
आफूले अवसर नपाउँदा कुनै गुनासो नरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, अहिले म शिक्षक पेसामा भएपनि आवश्यक पर्यो भने जागिर छाडेर मधेशका लागि आन्दोलन गर्छौ ।’
सिरहाका विजय यादव मधेश आन्दोलनमा निकै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँको भूमिका अग्रनी हुन्थ्यो तर उहाँ निस्कृय हुनुभएको छ ।
त्यस्तै अर्को नाम आउँछ दिनेश पुर्वेको । मधेश आन्दोलनमा शुरुदेखि लाग्नु भएका पूर्वे वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर समाजिक कार्यकर्ताको रुपमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।
रामजानकी धर्मशाला बनाउने अभियानमा लाग्नुभएको छ उहाँ ।
कपिलवस्तुका सीपी चौधरी मधेशको राजनीति छाडेर कलेज पढाउन थाल्नुभएको छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट मधेश आन्दोलनमा सक्रिय दीपक गुप्ता अहिले बिल्कुलै निस्कृय हुनुहुन्छ ।
राजनीतिक छाडेर उहाँ पढाई लेखाई र अध्ययन अनुसन्धानमा फर्किनु भएको छ ।
काठमाडौ उपत्यकामा विद्यार्थी नेताको रुपमा परिचित राधेश्याम चौधरी अहिले राजनीतिबाट धेरै टाढा गइसक्नु भएको छ ।
उहाँ जनकपुरको एक कलेजमा अध्यापन गराउन थाल्नुभएको छ । मधेशका लागि आन्दोलन गर्नुभयो तर अवसर अरुको पोल्टामा गएको उहाँको गुनासो छ ।
शुरुको मधेश आन्दोलनमा सक्रिय धुपेन्द्र झा नेपाल सरकारको जागिरे भएका छन् भने विजय पटेल, सुभाष वैठा अमेरिका पलायन हुनुभएको छ ।
अभिनाश सिंह भारत पालयन हुनुभएको छ । उहाँ पनि मधेश आन्दोलनको समयमा निकै सक्रिय युवा हुनुहुन्थ्यो । तर आन्दोलनपछि मधेश राजनीतिमा निराशा मात्र आएपछि उहाँ निस्कृय हुँदै जानुभयो ।
सप्तरीका विनोद साफी राजनीतिक छाडेर व्यावसायमा लाग्नुभएको छ भने तुला माझी राजपा नेपालमा भएपनि उहाँ औषधी पसल सञ्चालन गरेर बस्नुभएको छ ।
त्यस्तै सप्तरीका सुरेन्द्र साह जो मधेश आन्दोनलको समयमा उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण थियो तर उहाँ जेपी गुप्तासँगै निस्कृय हुनुभएको छ ।
काठमाडौ उपत्यका युवा आन्दोलनकारीको रुपमा परिचित जितेन्द्र साह आन्दोलनकै क्रममा वेपत्ता हुनुभएको थियो । तर अहिलेसम्म उहाँको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
तत्कालिन युवा फोरममा सक्रिय उहाँको खोजी गर्न उहाँका पार्टीले पनि चासो देखाएको छैन । विजय मस्त मधेश आन्दोलनमा सुनिएको नाम हो तर उहाँ अहिलेको राजनीतिबाट टाढा हुनुहुन्छ ।
आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनु भएको उहाँ आइएनजीयोमा जागिरे हुनुहुन्छ । हरी यादव विद्यार्थी नेताका रुपमा सक्रिय थिए तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले उहाँलाई निस्कृया बनाएको छ ।
प्रियंका झा शुरुदेखि मधेश आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो तर अहिले धनुषामा शिक्षिका भएकी छिन् ।
जेपी गुप्ताको साथमा रहेर मधेश राजनीतिमा सक्रिय राजेन्द्र राम अहिले राजनीतिकबाट टाढा हुनुभएको छ र धर्मकर्ममा लाग्नुभएको छ ।
रातोपासपोर्ट काण्डमा मुछिएपछि निस्कृय भएका हाल उहाँ विकास निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको आरोपमा थुनामा हुनुहुन्छ ।
भाग्यनाथ बैठा पनि कुनै लेनदेनको मुद्दामा थुनामा हुनुहुन्छ । वैठा पनि मधेश आन्दोलनको समयमा सक्रिय भूमिकामा थिए । बाराका पप्पु सिंह शिक्षक हुनुभएको छ भने अनिल गुप्ता जो मधेश आन्दोलनमा शुरुदेखि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले निस्कृय भएका छन् र क्रिकेट खेलका प्रशिक्षक भएर काम गरिहनु भएको छ ।
राजिव झा शिक्षक पेसा अँगाल्न बाध्य हुनुभएको छ । यस्ता थुप्रै युवाहरु छन् जो मधेशका लागि आफ्नो योगदान दिए तर अहिले ओझेल हुनुभएको छ । त्यसमध्येका अब्दुल सलाम, पर्साका रञ्जित साह, सन्तोष परियार, सिरहाका दिनेश्वर गुप्ता, कृष्ण यादव पनि हुन् ।
सप्तरीका बलराम यादव र सिरहाका काशिन्द्र यादव पनि राजनीतिकबाट टाढा हुनुहुन्छ । त्रिविमा अध्ययन गर्ने क्रममा मधेश आन्दोलनको तयारी सक्रिय भएर लागेका उहाँहरु केही दिन मधेश राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो तर अहिले टाढिनु भएको छ ।
यद्यपी उहाँहरु कुनै पार्टीमा नभएपनि मधेशको बारेमा बोल्ने र लेख्ने काम गर्दै आउनुभएको छ । सिरहाका रामसुफल सदाय पनि मधेश आन्दोलनको समयमा निकै सक्रिय थिए तर पछिल्लो समय निस्कृय भएर शिक्षक पेसामा लाग्नुभएको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, मधेश आन्दोलन गर्ने हामी अवसर लिने बेला अरु आएपछि हामी आफै साइड लागेका हौं ।’ मधेश आन्दोलनले अवसरवादी मात्र जन्माएको उहाँको गुनासो छ ।
धनुषाका दीपक झाले त मधेश आन्देलनकारी नेतृत्वकर्ता समूह २०६३ नै गठन गर्नुभएको छ । मधेश आन्दोलनको शुरुवातदेखि लाग्नुएकाका आन्दोलनकारीलाई जोड्नका लागि यो संगठन बनाउनुभएको हो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, शुरुदेखि जजसले मधेश आन्दोलन गरे ती सबै अहिले निस्कृय हुनुभएको छ । उहाँहरुलाई खोज्ने र सक्रिय बनाउनका लागि संगठन बनाएका हौं ।’
२०६३ सालतिर मधेशको नाम लिने अवस्था थिएन । कोही आन्दोलनमा आउन तयार हुँदैन्थ्यो तर त्यतिबेला केही युवा नेताहरुले आँट गरेर आन्दोलन जगाए ।
सडक तताए तर आज उनीहरु गौण छन् कही सक्रियता नदेखिएको उहाँले दावी छ ।
सुनसरीका कपलेश्वर यादव जो मधेश आन्दोलनको शुरुवातदेखि नै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ।
तत्कालिन फोरम नेपालको विद्यार्थी नेताको रुपमा सक्रिय उहाँ अहिले विजयकुमार गच्छदारका साथमा काँग्रेसमा हुनुहुन्छ । उहाँ अहिले नेविसंघका महासचिव हुनुहुन्छ ।
चितवनका हेमन्त झा राजपाका जिल्ला अध्यक्ष हुनुभएको छ भने सप्तरीका पंकज देव राजपा नेपालमा रहेपनि उहाँ निस्कृय जस्तै हुनुहुन्छ ।
शिवजी सोनी जो शुरुदेखि मधेश आन्दोलनमा सक्रिय भएर लाग्नुभएको थियो । अहिले पनि उहाँ समाजवादी पार्टी फोरम नेपालका विद्यार्थी नेताका रुपमा सक्रिय हुनुहुन्छ तर आफ्नो राजनीतिक उचाई बनाउन सक्नुभएन ।
कन्हैया ठाकुर विजयकुमार गच्छदारको स्वकीय सचिव भएर काम गरिरहनु भएको छ । बीपी यादव जो पहिलो मधेश आन्दोलनका प्रमुख हर्ताकर्ता हुनुहुन्थ्यो ।
मधेश आन्दोलनको शुरुवातादेखि लागेका उहाँ राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।
मधेशी युवाको रुपमा मधेश आन्दोलन गरेका फुलाराम थारु अहिले काँग्रेसमा हुनुहुन्छ । विजयकुमार गच्छदारसँग लामो समयसम्म मधेश राजनीतिमा सक्रिय उहाँ गच्छदारसँगै काँग्रेसमा जानु भएको छ ।
मधेशको पछिल्लो राजनीति घटनाक्रमबाट उहाँ पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । उहाँले मधेशका लागि दिएको योगदान त्यतिकै खेर गएको बताउँनुहुन्छ ।
फोरम नेपालको विद्यार्थी राजनीतिबाट मधेश आन्दोलनमा सक्रिय सप्तरीका अशोक यादव हाल समाजवादी पार्टी, नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।
उहाँ राजनीतिमा सक्रिय भएपनि अवसरबाट निकै टाढा देखिनुहुन्छ । पार्टीले शुरुदेखि नै उहाँमाथि अन्याय गर्दै आएको चर्चा पार्टीभित्रै सुनिन्छ । त्यस्तै शम्भु निर्दोषी राजपा नेपाल विद्यार्थी संगठनका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
मधेश आन्दोलनको शुरुवातदेखि नै राजनीतिमा लाग्नुभएको छ । तर प्रगति शुन्य छ । उहाँ पनि मधेश राजनीतिबाट फ्रस्टेड हुनुहुन्छ ।
कृष्ण सिंह राजपा नेपालका प्रवक्ता हुनुहुन्छ भने संजय यादव सचिव र जेपी यादव विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ । उहाँहरु पनि विद्यार्थी राजनीतिबाट नै मधेश आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । मनिष मिश्रा राजपा नेपालको विद्यार्थी अध्यक्ष रहनु भएको छ ।
तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो यात्रा तय गर्नुभएका केशव झा अझै पनि राजनीतिकमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।
उहाँ विभिन्न दल हुँदै अहिले राजपा नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ । मधेश आन्दोलनको शुरुवातदेखि अहिलेसम्म सक्रिय रहनुभएका उहाँ भन्नुहुन्छ, राजनीतिकमा धैर्यता धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो, आजैको आजै सबै कुरा प्राप्त गर्छु भनेर हुँदैन त्यसका लागि धैर्य गर्नुपर्छ ।
दुखसुख गरेर बसेका थुप्रै युवाहरु अवसर पाएका छन् ।’
कतिपय युवामाथि अन्याय नभएको भनि नकार्न नसकिने भन्दै उहाँले नेपालको राजनीति युवाका लागि त्यति सजिलो नरहेको बताउनुभयो ।
राजनीतिमा युवाका लागि चुनौति जस्तै अवसर पनि रहेको बताउँदै उहाँले मधेश आन्दोलनमा लागेका थुप्रै युवाहरु राजनीतिकबाट पलायन भएको बताउनुभयो ।
१३ वर्षदेखि मधेश आन्दोलनमा लाग्नुभएका युवामध्ये थोरै युवाले अवसर पाउनु भएको छ । २०६५ सालदेखि मधेशवादी सरकारमा सहभागी हुँदै आइरहेको छ त्यसमा मधेश आन्दोलनमा खासै योगदान नदिएका व्यक्तिको हालीमुहाली रह्यो ।
कोही आन्दोलन शुरु भइसकेपछि बलेको आगो ताप्न आएको बेला त्यसैलाई निरन्तरता दिएर अवसर प्राप्त गर्नुभयो कपितय व्यक्ति आन्दोलनमा थिएन । आन्दोलनपछि पार्टीमा सहभागी भएर पार्टीबाट अवसरहरु लिनुभयो ।
मधेश आन्दोलन शुरुवात हुनुभन्दा पहिलादेखि त्यसको गतिविधिमा लागेका, आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गर्नमा थुप्रै युवाहरुले योगदान दिएका थिए तर थुप्रै पलायन भएका छन् । त्यसमध्ये तत्कालिन फोरम नेपालकै विद्यार्थी नेता सुरेश मण्डल अहिले प्रदेश २ का राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।
फोरम नेपाल हुँदै विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै राजपा नेपालका सहमहामन्त्री हुनुभएका उहाँ विद्यार्थी राजनीतिबाट मन्त्री हुँदा धेरैका लागि प्रेरणा भएको छ ।
त्यस्तैमा एकजना युवाको नाम आउँछ, उहाँ हुनुहुन्छ विक्की यादव जो आफ्नो सम्पूर्ण जीवन मधेश राजनीतिकमा लगाउनुभयो ।
सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा शुरु गर्नुभएका विक्की यादव निरन्तर आन्दोलनमा रहनु भयो । आज उहाँ प्रदेश २ का प्रदेशसभाका सदस्य हुनुहुन्छ ।
सर्लाहीका संजय यादव पनि फोरम नेपालमा युवाको राजनीतिक गर्नुभएका थियो । शुरुदेखि आन्दोलनमा लाग्नुभएका संजय यादव पनि प्रदेशसभाका सदस्य बन्नुभएको छ ।
विद्यार्थी नेता ओमलोक सिंह प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलको स्वीकय सचिव भएर काम गरिरहनु भएको छ । कैलाश महतो सिके राउतको पार्टी जनमतमा सक्रिय छन् ।
महोत्तरीका अभिराम शर्मा जो शुरुदेखि मधेश आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो अहिले उहाँ प्रदेश २ का राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यस्तै सप्तरीका शैलेन्द्र साह, धनुषाका ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रदेश २ का मन्त्री बन्नुभएको छ ।
उहाँहरु पनि मधेश आन्दोलनमा शुरुवातदेखि नै लाग्नुभएको थियो । मधेश आन्दोलन हुँदा सिरहाको मोर्चा सम्हानु भएका विजय यादव पनि प्रदेश २ का मन्त्री हुनुभएको छ । प्रदेश १ का जयराम यादव पनि आन्दोलनमा शुरुदेखि लाग्नुभएको थियो । उहाँ सविधानसभा सदस्य हुँदै अहिले प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।
सद्भावना पार्टीबाट राजनीति यात्रा शुरु गर्नुभएका मनिष सुमन हाल प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ भने राजपा नेपालका महासचिव हुनुहुन्छ । राजनीतिकमा लामो संघर्षपछि उहाँले यो अवसर पाउनुभएको हो ।
सलमा खातुन पत्रकारितासगै मधेश आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो अहिले पर्साको स्थानीय तहमा उपप्रमुख रहनुभएको छ ।
समाजवादी पार्टी, नेपालका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र राय यादव र राजपा नेपालका सचिव उपेन्द्र महतो आन्दोलनदेखि नै राजनीतिमा रहेपनि उहाँहरुको भूमिका फरक थियो । योगेन्द्र राय यादव उपेन्द्र यादवको स्वकीय सचिवको रुपमा काम गरिरहोक थिए भने उपेन्द्र महतो राजेन्द्र महतोको स्वकीय सचिव हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँहरु पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको छ । योगेन्द्रराय यादव प्रदेश २ का राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने उपेन्द्र महतो प्रदेशसभाका सदस्य हुनुहुन्छ ।
यद्यपी यति युवामा मात्र होइन, मधेश आन्दोलनमा हजारौ युवाको योगदान रहेको छ । तर यहाँ उठाउनको विषय के हो भने आन्दोलनको पृष्ठभूमी तयार गर्नमा शुरुदेखि काठमाडौदेखि मधेशसम्म सक्रिय भएर लाग्नुभएको थियो ।
पुनश्च अरु युवारु पनि छ जो सम्पर्कमा नआएको कारणले यहाँ नाम उल्लेख गर्न सकिएन तर उहाँहरुको भूमिका मधेश आन्दोलनका लागि महत्वपूर्ण थियो ।